စုံနံ့သာမြိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » စုံနံ့သာမြိုင်
Posted by thihayarzar on Sep 7, 2011 in Buddhism, News |0comments
စက်တင်ဘာလ ၃၊၄ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်တိုင်း မှော်ဘီမြို့နယ် မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ) သုဒ်ဓ၀ိပသာနာ ရိပ်သာမှာ ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ ဦးစီးဦးဆောင်ပြုပြီးတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများကို ဖိတ်ကြားပြီး စုံနံ့သာမြိုင် ပရဟိတအသင်းများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲနှင့် သာသနာ့အကျိုးတော်ဆောင် သုမင်္ဂလာအသင်း ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန် တတိယအကြိမ် ဆွေးနွေးခြင်းပွဲကို အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ် ……. အစည်းအဝေးသို့ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးမှ ပရဟိတအသင်းပေါင်း ၇၀၈ သင်းတက်ရောက်ပြီး ဧည့်ပရိသတ်ပေါင်း (၃၀၀၀)ကျော် တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် ….. အစည်းအဝေးကို သက်တော်ရှည်ဆရာတော်ကြီးများ မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)ဆရာတော် အရှင်ဇ၀န ၊ တွံတေးဆရာတော်၊ ရွှေည၀ါဆရာတော် ၊ကသာဆရာတော်၊ကျိုတ်ထိုဆရာတော် နှင့် တစ်ခြားဆရာတော် သံဃာတော်အပါး ၁၀၄ ပါးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် … ရန်ကုန်နာရေးကူညီမှုအသင်းမှ ဦးကျော်သူနှင့်အဖွဲ့ စာရေးဆရာများ မောင်ဝံသ၊မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) နှင့် တစ်ခြားစာရေးဆရာများလည်း တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် …..
အစည်းအဝေးကို တစ်ရက်ကို သုံးပိုင်းခွဲပြီး တစ်ပိုင်းကို သုံးနာရီကြာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် …. အစည်းအဝေးမှာ ပရဟိတအသင်းများ မှဆွေးနွေးခြင်း ဆရာတော်များမှ သြ၀ါဒပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် …. အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပရဟိတနိကာယ အသင်းချုပ်ကြီးဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း…. မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပရဟိတနိကာယ အသင်းချုပ်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာစေရန် တွံတေးဆရာတော်မှ သိန်း (၁၀၀၀) မတည်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ် …. တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပရဟိတအသင်းများနဲ့ဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ လိုအပ်သောနေရာများကို ကူညီထောက်ပံလှူဒါန်းရန်ဖြစ်ပါတယ် ……သာသနာ့အကျိုးတော်ဆောင် သုမင်္ဂလာ အသင်းတည်ထောင်ခြင်းမှာ အသင်းမှလုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းများ ၊ စည်းကမ်းများ၊ဥပဒေများကို ရှေ့နေကြီးများဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် ….
စုံနံ့သာမြိုင် ပရဟိတအသင်းများနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ နှင့် သာသနာ့အကျိုးတော်ဆောင် သုမင်္ဂလာ အသင်း ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း ပွဲသို့ကြွရောက်လာတဲ့ သံဃာတော်များနှင့် ဧည့်ပရိသတ် (၃၀၀၀)ကျော်ကို ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ မှအစစအရာရာကျွေးမွေးဧည့်ခံခဲ့ကြပါတယ် ….. ဝေယျာဝစ္စ လုပ်သား(၁၀၀) ကျော် ဧည်ခံခြင်း၊ကြိုဆိုခြင်း၊ကျွေးမွေးခြင်း၊အကြိုအပို့၊နေရာထိုင်ခင်းနှင့် အိပ်ရာများ ပြင်စင်ခြင်း၊သန့်ရှင်းရေး နှင့် အထွေထွေကိစ္စ များကို လိုလေသေးမရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါတယ် …. ၀င်လျှင်ဝင်ခြင်းပဲ လူ(၂၀)ကျော်မှ လက်အုပ်များချီပြီး မင်္ဂလာဟု မိတ်ဆက်ကြပါတယ် …. လူကြီးလူငယ်မရွေးအားလုံးကို လက်အုပ်လေးချီပြီး မင်္ဂလာပါ ဟုနှုက်ဆက်နေခြင်းကို ဝေယျာဝစ္စ အဖွဲ့ဝင် (၁၀၀)လုံးက ပြုမှုကြပါသည် ….လာရောက်ကြတဲ့ဧည်သည်များမှလည်း ပြန်လည်ပြီးလက်အုပ်လေးချီပြီး ပြန်နှုက်ဆက်ကြပါတယ် …. အရမ်းကိုကြည်ညိုလေးစားစရာကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်လေးတစ်ခုပါ …… တစ်နိုင်ငံလုံးပြုလုပ်သင့်တဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခုပါ…. ဧည့်သည်များကို လည်ဆွဲကက်နှင့်ကြိုးအ၀ါရောင်။ဝေယျာဝစ္စ အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်ဆွဲကက်နှင့် ကြိုးအနီရောင်များခွဲခြားထားပါတယ် ….. တစ်ခါမှမကြုံစဖူးခဲ့တဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ပရဟိတ အသင်းများကိုဖိတ်ကြားကာ သာသနာတော်ကြီးပြန့်ပွားတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်အချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် …… အားလုံးကလည်း အားရကျေနပ်ကာ တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပရဟိတနိကာယအသင်းချုပ် နှင့် သာသနာအကျိုးတော်ဆောင် သုမင်္ဂလာ အသင်းတွင် ၀င်ရောက်ပါဝင်ကြပြီး လက်မှတ်များရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ် …..ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလဧ။် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ချက်များမှာလည်း သာသနာတော်အတွက် အရမ်းကိုအားရနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်….. ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ ကိုလည်း အရင်ကထက်ကြည်ညိုလေးစားသူများ အများအပြားတွေ့ခဲ့ကြပါတယ် …. ဇွန်ပန်းရုံအနီး လှည်းဘီးနွံထဲ ကျွံနေသည် လေးလွန်း၍ မတွန်းနိုင်ဘူးလား ပြိုင်တူတွန်းလျှင်ရွေ့နိုင်ပါသည်တဲ့ ….. သာသနာ့တော်ဆိုတဲ့လှည်းကြီးကို တိုးတက်ပြန့်ပွားပြီး ရေရှည်တည်တံခိုင်မြဲအောင် တစ်ယောက်ထဲ တွန်းလျှင် အရမ်းလေးလွန်း၍မတွန်းနိုင်ဘူးလားတဲ့ အားလုံးကပြိုင်တူတွန်းလျှင် တိုးတက်ပြန့်ပွားပြီး ရေရှည်တည်တံခိုင်မြဲမှာဖြစ်ပါတယ်လို ဆိုလိုတယ်လို ကျွန်တော်ကတော့ထင်မိပါတယ် …… သာသနာ့တော်ကြီး ကမ္ဘာအလယ်မှာထည်ဝါဖို့ အားလုံးက၀ိုင်းဝန်း၍တွန်းပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ……
စုံနံ့သာမြိုင် ပရဟိတ အသင်းများနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ နှင့် သာသာနာ့အကျိုးတော်ဆောင် သုမင်္ဂလာ အသင်း ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း ပွဲကို ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသော ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ၊ဆရာတော် ဦးဇ၀န၊တွံတေးဆရာတော်၊နေ့မနားညမနား ကြီးကြပ်ပေးနေသော ဝေယျဝစ္စအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဆရာတော် ဦးဝိစာရ နှင့် ဝေယျာဝစ္စ အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကို ကြည်ညိုလေးစား ကျေးဇူးတင်လျှက်ရှိပါကြောင်း ရိုသေလေးစားစွာဖြင့် ရေးသားအပ်ပါသည် ………………. သာသနာ့တော်ကြီး ယခုထက်တိုးတက်ပြန့်ပွားပါစေ … ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ ဆန္ဒအတိုင်း ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ပါစေ ဟု အကြိမ်ကြိမ် ဆုတောင်းမိပါသည် ………………